Muslimiin Somali ku jjrto oo ka banaanbaxay khaniis la barayo caruurta Ingiriiska - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muslimiin ay Somali ku jitto ayaa banaanbax balaaran ka dhigey caasimada labaad ee Ingiriiska kadib markii dugsi muslimiintu ku badan yihiin laakiin khaniis ka yahay maamule uu isku dayay inuu ku socodsiiyo duruus cusub oo khaniiska taageersan.
Khaniisiinta Ingiriiska oo aad u farabadan awoodna ku leh meelo badan oo barlamaanku ka mid yahay ayaa sanadihii dambaba mariyay barlamaanka sharciyo iyaga u gaara oo ay ka mid yihiin in loo ogolaado in khaniisku is guursadaan.
Khaniisiinta Ingiriiska ayaan si toosa isku muujin karin laakiin hawshooda hoosta ka wada haddana ka mida sharci dejiyeyaasha ugu weyn ee dalka.
Sharciga ay rabaan in caruurta loo dhigo ayaa waxa ku jjra xorta ilmaha u leeyahay in khaniis noqon karo ayadoo ujeedadu tahay in caruurta yaryar lagu bilaabo in khaniisku caadi yahay oo la koraan sidaana lagu abuuro bulsho khaniiska iyo khaniisada ogol.
Waxa xataa sharciga lagu daray in waalidka loo ogolryn inay caruurtooda kala baxaan xiisadaha noocaana oo caadiyan la ogolyahay xiisadaha khuseeya arimaha xubnaha taranka oo taas lafteeda hadda la rabo inoo dhigo dhalaanka afar jirka ah.
Waalidiinta dugsigaas oo ku qaylinaya diidney in waalidka daaqada laga saaro ayaa dugsigaas syna soo xaadirin in ka badan 400 oo ardey. Taasina waxay keentay in laga noqfo xiisadaa.
Sharcigan khaniisiintu wataan ayaa welli horyaala barlamaanka waxase markiiba lagala hortagey diidmo.
Sharciyada khaniisiinta ayaa daaqada ka tuurey erayga waalid ama nin iyo naag iyo erayga guur waxayna ku bedeleen “la noole ama la qaybsade” si loo qariyo ninkeyga ama xaaskeyga.
Waxay kaloo ay faafiyaan erayga af-Ingiriiska lagu yiraa Jender oo aan tilmaameyn nin iyo naag oo lagu laakiin loogu talogalay khaniisiinta.